ဖြတ်သန်းရမယ့်နေ့ရက်တွေက ရှည်လျားတယ်၊ အတူတူဆော့ကစားနိုင်မယ့်သူကို ရှာယူပါတဲ့။ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
ဖြတ်သန်းရမယ့်နေ့ရက်တွေက ရှည်လျားတယ်၊ အတူတူဆော့ကစားနိုင်မယ့်သူကို ရှာယူပါတဲ့။
Author: lu bo | 8:48 PM | No မှတ်ချက် | Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ
မနေ့က မထင်မှတ်ဘဲ ဟောင်ကောင်နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခု အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်မိတယ်။
ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မင်းသမီးနဲ့ သူ့အမျိုးသား ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခုမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖြစ်နေတယ်။ လေယာဉ်နောက်ကျလို့ နှစ်ယောက်သား ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာနေပြီး အဆိုပွဲတစ်ခု သူတို့ကျင်းပလိုက်ကြတာပါ။
. စစချင်းမှာတော့ မင်းသမီးတစ်ယောက်တည်း မိုက်ခဲနေတယ်။ တီဗီဖန်သားပြင်ကိုကြည့်လိုက် ဆိုလိုက်၊ ကလိုက်လုပ်နေတယ်။ ခဏနေတော့ သူ့အမျိုးသားလည်း ပါဝင်လာတယ်။ သူ့အမျိုးသားက စဘေ့ဘောအင်္ကျီဝတ်ထားတယ်၊ လက်ထဲမှာလည်း သူဝတ်ထားတဲ့အင်္ကျီနဲ့ဆင်တူတဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုင်ထားတယ်။ ပြီးတော့ သီချင်းဆိုနေတဲ့မင်းသမီးကိုယ်ပေါ် ဝင်ဆင်ပေးပြီး နှစ်ယောက်သား ဝတ်စုံညီ သံပြိုင်ကကြဆိုကြတော့တယ်။ . လူတွေက soul mate.. soul mate လို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ အဲဒီ soul mate ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလည်းဆိုတာကို ကျွန်မတော့မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မမြင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် အပေးအယူညီမျှပြီး ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မင်းသမီးတို့စုံတွဲတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးက အကောင်းဆုံးလို့ပြောရတယ်။ . လေယာဉ်နောက်ကျတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတော်တော်များများရဲ့ လေယာဉ်ကွင်းရောက်လာတဲ့ပုံစံကို ကျွန်မတို့မြင်ယောင်ကြည့်ရအောင်။ စိတ်ညည်းညူမယ်၊ စိတ်ရှုပ်ဒေါသထွက်မယ်၊ မကျေမနပ်ရေရွတ်မယ်၊ တချို့က အချင်းချင်းအပြစ်တင်မယ်၊ နင့်ကြောင့် လေယာဉ်နောက်ကျတာလို့ဆိုမယ်။ နင့်ကြောင့်ပေါ့.. ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးမှာ ခရီးထွက်လာတာလို့ အပြစ်တင်ကြမယ်။ . ဒါပေမယ့် မင်းသမီးတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ဒီစိတ်ညစ်စရာအဖြစ်ကို ပျော်စရာအဆိုပွဲတစ်ခုအဖြစ် ကျင်းပလိုက်ကြတယ်။
အရင်တုန်းက ဒီအမျိုးသားဟာ ချောမောလှပတဲ့ဒီနာမည်ကြီးမင်းသမီးနဲ့ မတန်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်။ ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ သူတို့ကမှ တကယ့်နတ်ဖက်တဲ့အတွဲပါလို့ ကျွန်မကောက်ချက်ချမိတယ်။ . (၂)
အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဘယ်အရာကမှ နှစ်ယောက်အတူပျော်ရွှင်ကစားရတာလောက် လှပတဲ့အရာ မရှိတော့ဘူး။ ----
ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေက ပြောတယ်… အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ် secretion (ဓာတ်တစ်မျိုး)ရဲ့ ဟော်မုန်းကထုတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီလို ဓာတုပစ္စည်းပါတဲ့ဓာတ်က ရက်အကန့်အသတ်ရှိတယ်။ အရှည်ဆုံးကာလက ၁၈ လဖြစ်တယ်။ . စိတ်အားထက်သန်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါ ဘယ်အရာတွေက ကျန်ရှိနေခဲ့မလဲ…. .
ရှည်လျားတဲ့နေ့ရက်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြင် အခြားလူတစ်ယောက်နဲ့လည်း ကျွန်မတို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတယ်။ အချိန်ကာလာကြာလာတာနဲ့အမျှ နဂိုသူ့အပေါ်ထားရှိခဲ့တဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ ကျွန်မတို့မှာ လျော့နည်းသွားတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေမှာ လူတစ်ယောက်ကို အနီးကပ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြည့်မှ၊ မျက်နှာဖုံးတွေကွာကျ၊ တန်ဆာဆင်မှုတွေခွာချပြီးမှ နဂိုစစ်မှန်တဲ့သူ့အကျင့်စရိုက်ကို တွေ့ရတတ်တယ်။ .
ချစ်စခင်စကြင်နာစမှာရှိခဲ့တဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေဟာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ ခံတယ်။ အချိန်အတော်များများမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့နေ့ရက်တွေက ရေလိုပဲအရသာမဲ့တယ်။ စားတယ်၊ အိပ်တယ်၊ အလုပ်တက် အလုပ်ဆင်းတယ်။ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့လူတွေလည်းပဲ လူရှေ့သူရှေ့မှာ တောက်ပပြပြီးတဲ့နောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာမန်လူတစ်ယောက်အဖြစ်တည်ရှိနေတာကို တစ်ယောက်တည်းရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ . ရှည်လျားလှတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့နေ့ရက်တွေထဲမှာ ဒီ အရသာမဲ့ အထီးကျန်ဆန်ခြင်းတွေကို ဘာနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။ ဟော်မုန်းဓာတ်လှုံ့ဆော်အားမရှိတော့တဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာ အချင်းချင်းရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တွေကို နားလည်သည်းခံနိုင်နေကြသေးတာ၊ အချင်းချင်းမခွဲမခွာရှိနေကြသေးတာဟာ ဘာကြောင့်လဲ… . ဒီအမေးကို တချို့က တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားအရလို့ ဖြေကြလိမ့်မယ်။ တချို့က ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကြောင့်လို့ဆိုကြမယ်။ ဒါ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပါသလား။ သင့်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အိမ်ထောင်ရေးက အရည်အသွေးနိမ့်အိမ်ထောင်ရေးလို့ ဆိုရလိမ့်မယ်။ ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများဆုံးတွေ့မြင်နေရတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမျိုးဖြစ်တယ်။ . လင်မယားနှစ်ယောက်အတူရှိနေချိန်မှာ ပြောစရာစကားသိပ်မရှိတတ်ကြဘူး။ ကလေးအကြောင်းအပြင် တခြားပြောစရာစကား မရှိကြဘူး။ အပြင်ထွက်ငွေရှာမယ်၊ အိမ်ပြန်ထမင်းစားမယ်ဆိုတာကလွဲလို့ နှစ်ယောက်အတူရှိနေချိန်မှာ တခြားဘာလုပ်စရာရှိမှန်း၊ ဘာပြောစရာရှိမှန်း မသိကြတော့ဘူး။ တကယ်လို့ ကော်ဖီဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘားတစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်လက်ကိုတစ်ယောက်တွဲပြီး တွတ်ထိုးနေတယ်၊ ပွတ်သီးပွတ်သပ်ပြောဆိုနေတယ်ဆိုရင် သာမန်အခြေအနေမျိုးမှာ လူတွေက .. ဒါဟာ ချစ်စကြင်စတွေဖြစ်မယ်၊ အေး.. နောက်ကွယ်မှာ အငယ်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာဖြစ်မယ်၊ လင်မယားတွေဆို အဲလိုလုပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့… ဝေဖန်ပိုင်းဖြတ်တတ်ကြတယ်။ . အတူဆော့ကစားနိုင်တဲ့ လင်မယားမျိုးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ… . ဆက်ပါဦးမည်...
---- စာကတော်တော်ရှည်တယ်.. တစ်ရက်နည်းနည်း ဆက်ရေးမယ်..